Dzivisa Waini Kunetseka. Fara uye Unwe Bordeaux Les Ngano
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Waini & Midzimu » Dzivisa Waini Kunetseka. Fara uye Unwe Bordeaux Les Ngano
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Culinary • tsika nemagariro • France Kuputsa Nhau • Hospitality Industry • nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Waini & Midzimu
Fara. Imwai Bordeaux
Hazvishamise kuti waini inowanikwa mune dzakawanda hues - kubva yakajeka semvura, kusvika pakadzika, yakasviba uye yakasviba sevintage sirika velvet. Izvo zvakare hazvishamise kuti Bordeaux waini ari pakati peanonyanya kufarirwa muchisiko.
Iyo Bordeaux dunhu ndiyo hombe kuburitsa waini mudunhu muFrance uye inosanganisira 280,000 maeka emizambiringa uye 60 Appellations d'Origine Controlees (AOCs).
Kugadzira waini muchikamu chekumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweFrance kwakatanga pakauya vaRoma (funga muzana ramakore rekutanga).
Kunyangwe nzvimbo iyi ichirumbidzwa newaini yayo tsvuku, zvinonakidza kucherechedza kuti uku mukurumbira kuchangobva kuwanikwa.
Nhoroondo, iyo Bordeaux dunhu yaishuvira kune ayo (kazhinji) machena machena newaini vanogadzira vanopa zvakapfuura makumi masere muzana eminda yavo yemizambiringa kuSauternes, Barsac, Bordeaux Blanc neMakuva.
Yakanga isiri kusvika kuma1700s iyo tsvuku waini kubva kuBordeaux kufarira pamusika uye veChirungu vanofarira waini vakagamuchira iyo tsvuku Bordeaux waini kubva kuGraves ndokuitumidza kuti Claret (klairette). Kamwe vatambi vewine pavakacherekedza kukwidza mukutenga waini tsvuku, vakatanga kushanduka kubva pawhite kugadzirwa waini tsvuku. Shanduko iyi yakave yepamutemo mu1855 Classification iyo yakaratidza vagadziri vakanakisa mudunhu iri, ichivagadza 1-5. Kurongwa kwacho hakuna kumbobvira kwachinjwa (kunze kamwe chete) kunyangwe paine mamwe akawanda maini akasarudzika.
Kuti uratidze kuti yakakurumbira sei nzvimbo yekugadzira waini, funga chokwadi chekuti dunhu rinotsigira varidzi vechateaux 6100 nevamwe varimi vanogadzira mamirioni mazana matanhatu nemakumi mashanu emabhodhoro ewaini (650). Iko 2019 vintage yaisanganisira 2019 muzana yakatsvuka; 85.2 muzana yakasimuka; 4.4 muzana yakachena chena, uye 9.2 muzana inotapira chena.
Bordeaux ndiye mushandirwi mukuru mu viticulture uye indasitiri yewaini, ichipa anopfuura makumi mashanu nemashanu emabasa akananga uye asina kunangana. Vatatu kubva kumahofisi mana ekurima mudunhu anorima mizambiringa uye muhuwandu mune mazana mashanu nemazana matanhatu emadhizaini anogadzira waini yeAOC. Pakati peaya makumi mashanu neshanu muzana mabhizinesi ane mhuri, ane avhareji wemizambiringa saizi 55,000ha neminda yemizambiringa mikuru muEntre deux Mers neMedoc. Inofungidzirwa zvikamu zvishanu kubva muzana remuzambiringa wakazara weBordeaux ndewematunhu akapatsanurwa kumhiri kwekuruboshwe nekuRudyi mabhanga (winescholarguild.org).
Munharaunda, varidzi vema chateaux vanowanzo tengesa mazambiringa avo kuburikidza neane negociant anoita semunhu wepakati nekutenga migove yavo yemazambiringa nekutengesa / kugovera waini inoguma. Pa waini inogadzirwa mudunhu reBordeaux, 58 muzana inotengeswa mukati meFrance neakasara makumi mana neshanu muzana anotumirwa pasi rese.
Kwete Zvematongerwo enyika. Geography: Kuruboshwe, Kurudyi, Pakati
Dunhu reBordeaux rakakamurwa munzvimbo nenzvimbo yeGironde echikepe kuva Left Bank, Right Bank uye Entre-Deux-Mer (nzvimbo iri pakati peGironde Estuary neRwizi Dordogne).
Rekuruboshwe. Vanoda waini vanowana Medoc, Graves uye Sauternais (akanakisa terroirs - mavhu akavakirwa)
• Medoc inoratidzira Cabernet Sauvignon; mazambiringa anokura musanganiswa wevhu revhu uye alluvial gravel terrace.
• Makuva anoratidza Cabernet Sauvignon; ivhu rakavezwa nekuda kweyakaitika glacial chiitiko.
• Sauternais inoratidzira Sauternes (inotapira machena machena); ivhu rakaoma kwazvo rinogonesa kudhiraina, kudzivirira mazambiringa kubva pakuva nemvura yakawandisa.
Right Bank. Vanoda waini vanowana Libournais, Balye neBourg (ivhu rinotongwa nevhu nematombo)
• Libournais inoratidzira Saint-Emilion, Montagne, Pomerol, Fronsac, Cotes de Castillon; kazhinji limestone, jecha uye siliceous ivhu revhu.
• Balye inoratidzira Merlot, Cabernet Sauvignon uye Cabernet Franc; kunyanya ivhu pamusoro peivhu revhu.
• Bourg ine Malbec, Sauvignon Blanc, Muscadelle, uye Semillon pamwe neColombard neUngi; jecha, ivhu, mavhu uye ivhu revhu.
Entre-Deux-Mers (machena machena chete anotakura zita reAOC); Cadillac, Loupiac, Sainte-Croix-du Mont
• Cadillac (inozivikanwa neinotapira machena ewaini chena) ine Semillon, Sauvignon Blanc uye Sauvignon Gris; ine chalky uye ivhu rakaoma.
• Loupiac inoratidzira Semillon, Sauvignon Blanc, Muscadelle naSauvignon Gris; ivhu, ivhu remarara rinoumbwa nemavhu uye ivhu.
• Sante-Croix-du Mont inoratidza Semillon, Muscadelle, uye Sauvignon; ivhu, limestone ivhu.
Muchena Bordeaux waini inowanzo gadzirwa naSauvignon Blanc naSemillon uye vanoonekwa sevane hupenyu uye vatsva (Entre-Deux-Mers) kune akapfava uye macitrus-akafanana (Pessac-Leognan).
Iwaini tsvuku kubva kuBordeaux yakajairika-izere-uzere nekunhuhwirira kwevatema currants, plums uye pasi kana nyoro nyoro. Pamuromo, iyo flavour profile inosanganisira kushomeka, michero uye zvinonhuwira, kuendesa akawanda matannin (akanaka kukwegura).
Iyo Bordeaux tsvuku inowanzo kuve musanganiswa nemazita anoreva kudanwa kwewaini kwete pane chaiwo mazambiringa akasiyana akasanganisirwa. Mhando chena dzinosara zana muzana yemizambiringa yakasimwa, iine 100 muzana Sauvignon Blanc naSemillon ine imwe muzana Muscadelle nevamwe vachena.
Pamiti yemizambiringa yakasimwa mudunhu, 89 muzana mhando dzvuku, 59 muzana Merlot, 19 muzana Cabernet Sauvignon, 8 muzana Cabernet Franc uye maviri ekupedzisira muzana anosanganisira Petit Verdot, Malbec kana Carmenere.
Kunyangwe Mamiriro ekunze
Iyo Bordeaux mizambiringa inonakidzwa nehurefu, hunodziya chirimo, chitubu chakanyorova uye kudonha, ichiteverwa nechando chine mwero. La Foret des Landes, sango hombe remiti yemipaini, inodzivirira iyo Bordeaux dunhu kubva kumatambudziko emamiriro ekunze eAtlantic Ocean; zvisinei, shanduko yemamiriro ekunze iri kukanganisa dunhu uye kuita goho. Institut National de l'origine et de la Qualite (INAO), chikamu chebazi rezvekurima muFrance, vakapedza makore gumi vachitsvaga shanduko yemamiriro ekunze. Waini masayendisiti nevarimi muBordeaux vanofungisisa zvakakomba kudziya kwepasi uye ichangobvumidzwa mhando nyowani dzakanyatsokodzera kudzikisira iyo hydric kusagadzikana kwakabatana nekuwedzera kwetembiricha uye ipfupi kukura miitiro.
Muna Chikumi, 2019, Bordeaux neBordeaux Superieur Associations dzakabvumidza kuwedzerwa kwechinomwe chitsva chirwere nemhando yemazambiringa isingadziye uye izvi zvinomiririra kutanga kugadziridzwa kune gumi nematanhatu ekutanga nharaunda kubvira 13. Mhando nomwe idzva dzakatenderwa dzinosanganisira dzvuku (Marselan, Touriga Nacional, Castets, Arinarnoa), uye chena (Alvarinho, uye Lilorila) nekutanga kudyara kwemarudzi matsva akarongerwa gore rino. Mhando itsva idzi dzinogumira pa 1935 muzana yenzvimbo yakasimwa munda wemizambiringa uye haigone kuverengerana inopfuura gumi muzana yemusanganiswa wekupedzisira weruvara rwupi zvarwo.
Bordeaux yakaunza imwe enological uye yekurima maitiro ekugadzirisa shanduko yemamiriro ekunze kusanganisira: kugadzirisa akanakisa maitiro kune izvo zvido zvevintage imwe neimwe - kunonoka kuchekerera, kuwedzera mzambiringa trunk kukwirira kudzikisa nzvimbo yemashizha; kudzikisira-kutetepa kwemashizha kudzivirira mazambiringa kubva kuzuva; kugadzirisa nzvimbo dzehari kuti kudzikise kushushikana kwemvura (zvachose kana mwaka yakazadzwa nemvura zvichikonzera mamiriro eanaerobic); kukohwa husiku uye kudzikisa kuwanda kwemiti.
Zvinopfuura makumi matanhatu neshanu muzana eminda yemizambiringa yeBordeaux anozivikanwa nharaunda (muyadhi mutsva wedunhu). Bordeaux inotungamira ese maFrench AOPs muhuwandu hweHigh Environmental Value (HVE) zvitupa zvekushambadzira kwavo, vasvika padanho repamusoro rechitupa chakasimba muFrance uye ne65 muzana inowedzera mune zvekurima zvekurima.
Vanogadzira winame muBordeaux vanogovana pamwe chete uye kuzvipira kugadzirisa shanduko yemamiriro ekunze nekuchengetedza mvura shoma nemagetsi. kuchengetedza zvisikwa zvisina kusimba; uye kutsigira zvipenyu kubva pane akanakisa emunda wemizambiringa maitiro kune imwe nzira yekurongedza. Kuzvipira mukusimudzira kunosanganisira kutarisisa mukusimudzira kuchengetedzeka kwevashandi, kugutsikana kwebasa uye kudzidziswa uye kusimudzira / kudzidziswa kwezvizvarwa zvazvino uye zvinotevera.
Waini Yakakosha Chateau muBordeaux
Domaines Barons de Rothschild (Lafite) Les Legendes Inoita Waini Yakanaka Kutengeka
Nhoroondo dzewaini dzeLafite uye Latour dzinosvika mazana emakore. Kekutanga nguva iyo zita reLafite rinowanikwa rakadzokera kuzana ramakore rechi13 (1234) apo Gombaud deLafite, abbot weVertheuil Monastery (kuchamhembe kwePauillac) anotaurwa. Zita rekuti Lafite rinobva pazwi remutauro weGascon "la hite" kana hillock.
Zvinofungidzirwa kuti minda yemizambiringa yaive yatove panzvimbo iyi apo mhuri yeSegur yakaronga munda wemizambiringa muzana ramakore rechi17 uye Lafite yakatanga kuzivikanwa senzvimbo huru yekutengesa winini. Muzana ramakore rechi 18 Lafite akatanga kuongorora musika weLondon uye akacherechedzwa muLondon Gazette (1707) achitsanangura waini iyi seyeNew French clarets. Robert Walpole, Mutungamiriri, akatenga dhiramu reLafite mwedzi mitatu yega yega. Chido cheFrance muwaini yeBordeaux hachina kutanga kusvika makore mazhinji akatevera mumakwara eBrits.
Munguva yezana ramakore regumi nemasere Marquis Nicolas Alexandre de Segur akavandudza hunyanzvi hwekugadzira waini uye akasimudzira mukurumbira wewaini yakanaka mumisika yekunze uye kunyanya kuDare reVersailles. Anozivikanwa sa "Muchinda wewaini," Lafite akazova The Kings Waini nerutsigiro rweanokwanisa mumiriri, Marechal de Richelieu. Richelieu paakagadzwa kuva Gavhuna weGuyenne, akabvunza chiremba weBordeaux uyo akamupa zano rekuti Chateau Lafite ndiye, "akanakisa uye anonakidza kupfuura zvese." Richeliu paakadzokera kuParis, Louis XV akamuudza, "Marechal, unoratidzika semakore makumi maviri nemashanu mudiki pane zvawaiita pawakaenda kuGuyenne." Richeliu akataura kuti akawana Tsime reYouth riine waini yaChateau Lafite iyo, se "inonaka, ine rupo, ine hunyoro, yakafanana neambrosia yeVamwari veOlympus."
Lafite aive neruzivo rwakanaka kuVersailles uye akatambira mvumo yaMambo. Wese munhu zvino aida waini yeLafite uye Madame de Pompadour akaiunza nemabiko ake echirariro uye Madame du Barry aishandira waini yaMambo chete.
Iwo anokosheswa maBordeaux wines eFrance aristocracy (Domaines Barons de Rothschild / Lafite) anowanikwa kwatiri kuburikidza neLegende brand.
1. Nhoroondo yeMedoc 2018. 50 muzana Merlot, 40 muzana Cabernet Sauvignon, 10 muzana Petit Verdot. Pamwe zera mu oak kwemwedzi misere vachipa zvinyorwa zvevanilla uye zvinopfungairira pasi pesimba.
Ziso rinonakidzwa neiyo tsvuku tsvuku hue apo mhino inovaraidzwa nehunhu hwekunhuhwirira hwezvinonhuwira zvinotapira, michero mitsvuku, musanganiswa wezvinotapira, zvinovava, zvine munyu uye unovava (funga licorice), inowedzerwa nezvinyorwa zvemocha uye toast kubva mudhara kukwegura. . Iyo tavara inononoka pamuromo ichiratidza chiitiko chinotapira uye chinotapira kuendesa kutsva pakupedzisa. Pair nenyama yemombe, gwayana, nyama yemhuka, kana huku.
2. Nhoroondo R Pauillac 2017. 70 muzana Cabernet Sauvignon, 30 muzana Merlot. Makumi makumi matanhatu muzana akakwegura muFrench oak kwemwedzi gumi nemaviri.
Iko kwekutanga kuona iko kweiyi yakadzika yepepuru waini nemazano evatema zvinoratidza kuti ichave yakanyanyisa uye yakangwara. Mhino inowana yakanaka yakanaka bhaau wezvinonhuwira, rasipiberi jamu, vanilla nedombo rakaoma vachifara vachivhengana pamwechete. Kuzvishingisa pamukanwa, zvinounza zvisaririra zvemichero mitema, coconut, uye vanilla nematani akafukidzwa. Iyi iwaini izere-muviri uye inoita chirevo chakashinga. Pair nenyama yemombe, nyama yakabikwa, chizi dzakakura senge Comte uye Saint Netaire.
3. Legende Saint-Emilion 2016. 95 muzana Merlot, 5 muzana Cabernet Franc (kubva kuLibourne dunhu). Makumi mana muzana vakakwegura muFrench oak migomo.
Iko kutanga kutarisa pawaini iyi kunopenya inopenya nhema tsvuku tsvuku hue. Mhino inofara kana yawana licorice, plums, cherries, matanda uye fodya. Iyo mukanwa unopihwa mubairo nemazano e mocha, mahebhu, mavhavha, pefiyumu, huni dzekare uye yakapfuma tannin mamiriro. Pair nedhadha kana mutambo wetrine uye quince jelly, bendekete regwayana rakakangwa nerosemary kana thyme, pizza uye pasta napolitana kana lasagna.
4. Nhoroondo R Bordeaux Rouge 2018. 60 muzana Cabernet Sauvignon, 40 muzana Merlot.
Vakwegura mwedzi mipfumbamwe mumakongiri ekongiri uye makumi matanhatu muzana yemusanganiswa wekupedzisira akakwegura mumabhiramu.
Crimson kune ziso nemuchero mutsvuku uye mablackberries, licorice uye zvinotapira zvinonhuwira zvinonyengerera mhino, kunyanya kuda sekunhuhwirira kwemocha uye tositi kubva mudhiramu kukwegura chime mune chiitiko. Nyowani uye muchero pamukanwa, iwo magumo unofadza muchero. Pair ne risotto nenyama muto, pasta Bolognese, ham uye salami.
5. Nhoroondo R Bordeaux Blanc 2020. 70 muzana Sauvignon Blanc, 30 muzana Semillon.
Ziso rinonakidzwa nepacst yegoridhe yeyero ine kupenya kwehuswa. Mhino inopihwa mubairo nemazano emichero yetropiki uye mazano eushoma. Iyo mukanwa inonyengerwa nekutenderera uye yakazara-yakasviba flavour inotungamira kune yakasununguka macitrus-matsva kupera. Pair nezvikafu zvegungwa, mbishi mbishi, chero chinhu chine Bearnaise muto uye green saladi (isiri-vhiniga yekupfeka).